Plastiki Injection Kuumba neInduction Heating Machine
Plastic jekiseni Kuumbwa pamwe induction heat inoda pre-kupisa kweiyo mafuru kune yakakwira tembiricha, kuve nechokwadi chekuyerera kwakakodzera kana kurapa kwejekiseni-rakaumbwa zvinhu. Hunhu hwekudziisa hunoshandiswa muindasitiri hwemhepo kana hwekusimudzira, asi hwakashata, husina basa, uye husingavimbike. Induction Heating ndiyo yakachena, inokurumidza uye inopa simba imwe nzira iyo yanga ichishandiswa zvakanyanya mumakore achangopfuura kutsiva hwemhepo, gasi kana kupisa kupisa kweforoma uye kufa.
Chii chinonzi jekiseni Kuumbwa?
Chipurasitiki jekiseni kuumbwa pamwe neiyo induction kudziisa ndiyo nzira yekunyunguduka epurasitiki pellets (thermosetting / thermoplastic mapolymers) ayo anokwanisa kuumbika zvakakwana, anojowa pakumanikidzwa kupinda muforoma mhango, iyo inozadza uye inosimbisa kuburitsa yekupedzisira chigadzirwa.
Sei Plastic jekiseni Kuumbwa Work?
Iyo epurasitiki jekiseni kuumbwa maitiro paProtolabs inzira yakajairwa inosanganisira aruminiyamu muforoma. Aluminium inoendesa kupisa zvakanyanya zvakanyanya kupfuura simbi, saka haidi kuti kutonhore nzira - zvinoreva kuti nguva yatino chengetedza pakutonhorera inogona kuiswa pakuongorora kumanikidza kuzadza, kunetseka kwekuzora uye kugadzira chikamu chemhando.
Resin pellets anoiswa mudhiramu umo anozopedzisira anyungudika, kumanikidzwa, uye kujowa mukati meiyo mamhanyiro emumhanyi system. Hot resin inopfurwa muforoma mhango kuburikidza nemasuwo uye chikamu chakaumbwa. Ejector pini inorerutsa kubviswa kwechikamu kubva muforoma umo inowira mubhaini rekutakudza. Kana kumhanya kwapera, zvikamu (kana yekutanga sampuro inomhanya) zvakaiswa mubhokisi uye kutumirwa munguva pfupi inotevera.
Iyo Induction Heating inoshandiswa muDies & Mould Maindasitiri?
Induction Kuchenesa zvishandiso uye mafuru epurasitiki jekiseni kuumbwa
Kuchenesa maturusi ekurapa ekurapa kwerabha chigadzirwa uye matai emota
Kufa induction kudziyisa kwe catheter kubatira uye zvekurapa zvigadzirwa kugadzira
Die uye platen kudziyisa simbi tsikwa uye kugadzira
Induction Kuchenesa kwekukanda muforoma muindasitiri yekurasa simbi
Induction Kupisa kurapa uye kuomesa kwekusimbisa uye kubaya maturusi uye kufa
Categories Kupinza Kupisa PDF, Technologies Tags IH Plastic jekiseni richigadzirisa, induction kudziyisa jekiseni kuumbwa, Induction jekiseni Kuumbwa, induction jekiseni kuumba hita, induction Plastic Jekiseni Kuumbwa, Kubaya jekiseni, Plastic In sindion Kuumba, Plastic jekiseni richigadzirisa, Plastic jekiseni richigadzirisa hita, Plastic jekiseni richigadzirisa Machine, Plastic jekiseni richigadzirisa System, Chii chinonzi jekiseni Kuumbwa Post navigation
Induction Steam bhaira